Malunga nathi-Shenzhen Polymer Ibhetri CO, LTD
Shenzhen Polymer Ibhetri CO., LTD
Njengomenzi onobuchule kukho iinjineli ezimalunga nama-30 kwiqela le-PLM R&D kubandakanya i-5 PHD, i-10 MFD kunye neeBachelors ezili-15. Malunga nezixhobo ezingama-30 izixhobo zokuvelisa ezizenzekelayo, i-25 nubit Semi-ezenzekelayo yezixhobo kunye ne-8 yemigca yemveliso kumzi-mveliso wethu.
Kwi-PLM, siye sazinikela ekuboneleleni ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu kubathengi, sikwanoxanduva kwaye sanelisa emva kokuthengisa, nasiphi na isikhalazo siyakuphendulwa.
ngaphakathi kweeyure ezingama-24 kwaye kwenziwe inkqubo engezantsi: ukulandelela emva, ukuhlalutya, ukushwankathela kunye nomba wengxelo we-8D, qhubeka uphucula umgangatho wethu wokuhlangabezana nenqanaba lokwaneliseka kwabathengi.
I-Shenzhen Polymer Battery CO., LTD yasekwa ngonyaka ka-2014, kwaye ngumvelisi weebhetri ze-lithium ion ekhokelayo onembali engaphezu kwe-5years e-China. Ezona mveliso ziibhetri ezinokuphinda zisebenze kwakhona, ibhetri ye-18650 ibhetri, ibhetri ye-e-bhayisekile, iipakethi zebhetri ze-lithium okanye naziphi na iiprojekthi zeebhetri ezenziwe ngezifiso. Sinokubonelela ngesisombululo sinyathelo elinye kunye neemveliso zechungechunge lonke ukusuka kwiibhetri ukuya kwizinto zebhetri njengeemfuno zabathengi.
Siyi-lithium-ion ibhetri yengcali. Ukuba unomdla kuyo nayiphi na imveliso yethu, ungaqhakamshelana nathi nge-imeyile ngezantsi okanye ngasekunene kwiwebhusayithi. Siza kunxibelelana nawe ngaphakathi kweiyure ezingama-24!